အားလုံး သိခငျြနတေဲ့ ကိုဗဈ ကာကှယျဆေး အကွောငျးကို ဒေါကျတာခငျခငျကွီး ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ ရှငျးပွလိုကျပါပွီ – Daily Feed MM
Admin_John | January 30, 2021 | News | No Comments
အပိုငျး (၁) ၂၇/၁/၂၀၂၁ မှာကာကှယျဆေး စတငျ ထိုးနှံပါပွီ တိုငျး/ပွညျနယျအနှံ့ ကနျြးမာ ရေးဝနျထမျးလူဦးရစေုစုပေါငျး ၃ သောငျးကြျောကို ထိုးနှံပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ဒါဟာ ဂုဏျယူစရာကောငျးလှနျးပါတယျ ဘယျသူတှရေဲ့စှမျး
ဆောငျမှုလဲဆိုတော့ အ စိုးရ ပွညျသူလူထုအားလုံးစညျးလုံညီညှတျ မှုရဲ့ပွယုဒျဖွဈပါတယျ နောကျနတှေ့မှော ကာကှယျဆေးကို တနိုငျငံလုံးရှိ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှကေိုဆကျထိုးသှားပါမယျ၂၉ နဲ့ ၃၀ မှာတော့ ပွညျထောငျ စု
လှတျတျော အမြိုးသားလှတျတျောနဲ့ တပျမတျောသားကိုယျစားလှယျမြားကို ထိုးနှံပေးမှာဖွဈပါတယျ။နောကျလ ဖဖေျောဝါရီ ၅ ရကျနကေ့စပွီး ပွညျသူတှကေို ထိုးနှံပေးမှာဖွဈပါတယျ ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ပွညျထောငျစုအဆငျ့ တိုငျး/
ပွညျနယျအဆငျ့ အစိုးရအဖှဲ့ဝငျမြား အတူထိုးနှံကွမှာဖွဈပါတယျ။ပွညျသူတှထေဲကဆို ဘယျသူတှကေိုဦး စားပေးမလဲ ဒါကတော့ No doubt သံသယဖွဈစရာမလိုတဲ့ အသကျကွီးတဲ့ မိဘပွညျသူတှပေဲ ဖွဈပါတယျဒါဟာနိုငျငံတိုငျးမှာ
ကနျြး မာရေးဝနျထမျးတှနေဲ့နဲ့အတူတတနျးတစားထဲ ဦးစားပေးစာရငျးထဲ အမွဲပါသငျ့တဲ့လူအုပျစုဖွဈပါတယျ ဒီအုပျစု သညျ ရောဂါဖွဈပှားကူးစကျလှယျပွီး ဖွဈပှားလြှငျသဆေုံးမှု မြားပါတယျ။၇၅ နှဈအထကျဆို ၅ ယောကျဖွဈလြှငျ
တဈယောကျသဆေုံးနိုငျပါတယျ ၆၁-၇၅ အသကျအရှယျဖွဈလြှငျ ဆယျယောကျလြှငျ တဈယောကျသဆေုံးနိုငျပါတယျ ဒါဆိုမွနျမာနိုငျငံမှာ အသကျ ၆၅ နှဈအထကျ ဘယျလောကျရှိနသေလဲ လူဦးရနေဲ့သနျးခေါငျစာရငျးဌာနက
တာဝနျရှိသူကို မေးမွနျးခကျြအရ ၂၀၂၀ အောကျတိုဘာလကုနျအထိအသကျ ၆၅ နှဈအထကျက ၃.၆ သနျးကြျောရှိပါတယျ ဒါဆို ၆၀ အထကျကရောဆိုတော့ ၅.၆၅ သနျးရှိပါတယျ ၁၈ နှဈအောကျက ၁၇.၈၅ သနျးရှိပါတယျ။ဒါ
ဆိုကာကှယျဆေးရရှိနိုငျမှုအခွအေနကေရော …COVAX ကနေ လူဦးရရေဲ့ ၂၀% ကို ၂၀၂၁ အတှငျးရနိုငျပါတယျ ဧပွီလ ၇ ရကျ ကမ်ဘာ့ကနျြးမာရေးနမေ့တိုငျခငျ အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံတှကေို ပေးပို့မှာဖွဈပါတယျ။
ရကျ ၁၀၀ စီမံခကျြအရ ဆောငျရှကျနတောဖွဈပါတယျ ဒါဆို ဘယျတော့ရမလဲဆိုတာ ကတော့ ရှငျးမှာပါ မတျလကုနျ ဧပွီလဆနျးမှာရမယျ ဘယျလောကျရမလဲ ဆိုတာတော့ သခြောမသိသေးပမေဲ့ ကာကှယျဆေးရရှိမှုအပျေါမူတညျ
ပွီးအခြိုးကရြမှာဖွဈပါတယျ ၂၀% ကိုတော့ တခါတညျးရမှာ မဟုတျပါဘူး အသုတျလိုကျရမှာဖွဈပါတယျ လကျရှိ COVAX က ကာကှယျဆေး သနျး ၃,၀၀၀ (၃ ဘီလီယံ) ကို ရရှိဖို့ရညျမှနျးထားတာမှာ သနျး ၂,၀၀၀ (၂ ဘီလီ
ယံ) ရရှိပွီး ဖွဈတဲ့အတှကျ အတေျာ့ကို အခွအေနေ ကောငျးနပေါပွီCOVAX မှာအဖှဲ့ဝငျနိုငျငံ ၁၉၀ ရှိတဲ့အနကျ မွနျမာနိုငျငံက ဖှံ့ဖွိုးမှုအလယျအလတျနဲ့ ဖှံ့ဖွိုးမှုလိုအပျတဲ့တိုငျးပွညျ ၉၂ နိုငျငံထဲပါဝငျပါတယျ လကျရှိအနနေဲ့ COVAX က
တိုငျးပွညျ ၄၆ နိုငျငံကိုPfizer ကာကှယျဆေးတှေ ဖွနျ့ဖွူးနပေါပွီ ဒီထဲမှာ ဖှံ့ဖွိုးပွီးတိုငျးပွညျ ၃၆ နဲ့ ဖှံဖွိုးမှု အလယျအလတျရှိတဲ့တိုငျးပွညျ ၆ နိုငျငံပါဝငျပါတယျ မွနျမာနိုငျငံကိုလညျး မတျလအတှငျး ရောကျဖို့ရှိပါတယျ။လကျရှိ WHO
က အသိအမှတျပွု Pre qualified vaccine မရှိသေးပမေဲ့ ဒီလိုမြိုး နိုငျငံအခငျြးခငျြး သယျယူ ပို့ဆောငျနိုငျဖို့ WHO အနနေဲ့ လိုအပျတဲ့အခကျြအလကျတှကေို စဈဆေးပွီးနောကျအရေးပျေါအသုံးပွုမယျ့ကာကှယျဆေး Emergency
Use List (EUL) ထဲမှာ ထညျ့သှငျးပါတယျ လကျရှိအခြိနျအထိကတော့ Pfizer/BioNTech ကာကှယျဆေးတဈခုသာ EUL ထဲမှာရောကျနေ ပမေယျ့နောကျထပျ Moderna နဲ့ Oxford/AstraZeneca ကာကှယျဆေးကိုလညျး
EUL ထဲမှာထညျ့သှငျးနိုငျဖို့ အခကျြအလကျမြား တောငျးခံထားပါတယျ မကွာခငျပါဝငျနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့ရပါ တယျ ဒီလို EUL ထဲပါမှ COVAX က နိုငျငံတှကေို ပေးပို့တဲ့စာရငျးထဲ ပါဝငျမှာပါပွီးတော့ အိန်ဒိယကနေ Covishield
ကာကှယျဆေး လူဦးရေ ၁၅ သနျးစာ (ကာကှယျဆေးအလုံး သနျး ၃၀) ဝယျယူထားဖို့ ကုနျအမှာစာကို Jan ၅ ရကျနကေ့ ပေးပို့ ထားပွီးဖွဈပါတယျ အမှာအတှကျ ပေးရမယျ့ငှေ အမရေိကနျဒျေါလာရ၅ သနျးကို Jan 14 ရကျနေ့
နောကျဆုံးထားပေးခရြေမယျဆိုတော့ ခုလောကျဆို ပေးခပြွေီး ဖွဈလောကျပါပွီ ကနျြတဲ့တဈဝကျ ဒျေါလာ ၇၅ သနျးကို ကာကှယျဆေးအလုံးရေ ၁၀ သနျးရောကျပွီးတဲ့နောကျ အနီးဆုံးဖှငျ့ရကျမှာ ပေးခရြေမယျလို့သိရပါတယျ ရှလေ့
ဖဖေျောဝါရီ ပထမအပတျမှာလဲ ဆေး ၂ သနျးထပျမံရောကျရှိပါအုံးမယျမွနျမာနိုငျငံလူဦးရေ ၂၀၂၀ အရ စုစုပေါငျးလူဦးရေ ၅၄.၉ သနျးရှိပါတယျ ဒါဟာ ၂၀၁၄ သနျးခေါငျစာရငျးအပျေါ အခွပွေုပွီး projection အရ တှကျခကျြထား
တာဖွဈပါတယျ ဒါဟာပွညျတှငျးမှာနသေူတှသောပါဝငျပွီး ပွညျပရောကျနသေူ၎.၂၅ သနျး ရှိပါတယျ ဒီလူတှထေဲက ၇၀% သညျထိုငျးနိုငျငံရောကျနပွေီး ၁၅% သညျ မလေးရှားနှငျ့ ကနျြ ၁၅% သညျ အခွားနိုငျငံမြားတှငျ ရောကျရှိနေ
သော မွနျမာလူမြိုးမြားပါဝငျပါသညျ သို့ဖွဈပါ၍ ဝယျယူထားသော ၁၅ သနျးသညျ လူဦးရေ၏ ၂၆% နီးပါးရှိပါသညျထို့ပွငျ အိန်ဒိယက အိမျနီးခငျြးနိုငျငံအခငျြးခငျြး ခဈြကွညျမှု၏ ပွယုဒျအဖွဈ ပေးအပျထားသော ကာကှယျဆေး ၁.၅
သနျး (လူဦးရေ ၇.၅ သိနျးစာ) Covishield ကာကှယျဆေးကလညျး ၂၂/၁/၂၀၂၁ နတှေ့ငျ ရောကျရှိခဲ့ပွီး ယနတှေ့ငျပငျ စတငျထိုးနှံနပွေီ ဖွဈပါသညျ နောကျထပျလညျး လကျဆောငျဒုတိယအသုတျ ၁ သနျး လာဖှယျရှိ
ပါသညျ တရုတျနိုငျငံတျောကောငျစီဝငျနှငျ့နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး Mr.ဝမျယိလာရောကျစဉျကလညျး ကာကှယျဆေးအလုံးရေ၃သိနျးလှူဒါနျးမညျဖွဈကွောငျးလညျး ပွောကွားခဲ့ပါသညျဒါဆိုရငျ၂၀၂၁ အတှငျး ကာကှယျဆေးရရှိနိုငျမှုသညျ
၄၆% အထကျ ရရှိနိုငျဖှယျရှိပွီး ယခုထကျ ပိုမို၍လညျး ရရှိနိုငျဖှယျရှိပါသညျ လကျရှိတှငျလညျး ကာကှယျဆေးအတှကျ အလှူငှကေောကျခံ ရာတှငျလညျး နိုငျငံတျောမှ မတညျငှေ တဈဘီလီယံကပျြဖွဈပွီး နိုငျငံသားမြားမှ ထညျ့
ဝငျငှေ ၁၉ ဘီလီယံနီးပါးဖွဈသညျ့အတှကျ ဘီလီယံ ၂၀ နီးပါး ရှိနပေါပွီ အမရေိကနျဒျေါလာ မတညျငှေ သနျး ၂၅၀ ထညျ့ ဝငျငှေ ၃ သနျးနီးပါးဖွဈသညျ့အတှကျ ၂၅၃ သနျး ဖွဈသညျကိုလညျး၂၁/၁/၂၀၂၁ နေ့ နိုငျငံတျော
အတိုငျပငျခံမိနျ့ခှနျးအရ ကွားသိရသညျမှာလညျး မြားစှာနှဈထောငျးအားရရှိလှပါသညျ ပွညျသူတို့၏ သဒ်ဓါတရားထကျ သနျမှုကလညျး တကယျ့ကို အံ့ခြီးလောကျစရာဖွဈပါသညျ။ဒါဆို ကိုဗဈကပျရောဂါကို ကာကှယျထိနျးခြုပျရနျ
လူဦးရဘေယျလောကျထိ ကာကှယျဆေးထိုးရမလဲ? ကာကှယျဆေးဝယျယူဖို့ ထညျ့ဝငျဖို့လိုပါသေးသလား?ဒါနဲ့ပတျ သကျလို့ဖွကွေညျ့ရမယျဆိုလြှငျ မြားလကေောငျးလပေါပဲ ဘာလို့ဒီလိုပွောရလဲဆိုရငျ ကာကှယျဆေးသညျ ပိုကျဆံရှိ
တိုငျးလညျး ဝယျဖို့မလှယျပါ ဝယျလိုအားကမြားနပွေီး ရောငျးလိုအားကအကနျ့အသတျရှိနပေါသညျ နောကျပွီး ကာကှယျဆေး အမြိုးအစားအလိုကျ ဈေးနှုနျးအမြိုးမြိုးရှိပါသညျ ကာကှယျဆေးရရှိရုံနဲ့လညျး ထိုးနှံသညျ့အဆငျ့ရောကျဖို့
operational cost မြားရှိပါသေးသညျ။နောကျပွီး လူအုပျစုအားလုံးကိုကာကှယျဖို့ အစုလိုကျကာကှယျနိုငျမှု Herd immunity နှငျ့ ပတျသကျ၍ WHO science in5episode #1, 28th August တှငျ ပွောပွခကျြအရ နိုငျငံ
လူဦးရေ၏၆၀-၇၀% ကာကှယျဆေးထိုးနှံရနျလိုအပျသညျဟု WHO မှ Chief Scientist Dr. Soumya က ပွောကွားခဲ့ပါသညျ သို့ရာတှငျ အဆိုပါ အခကျြသညျ ခွုံငုံ၍ ပွောခွငျးဖွဈပွီး တိုငျးပွညျတခုခငျြးစီ၏ ရောဂါဖွဈပှားမှုနှငျ့
Basic Reproduction Number R0 ပျေါတှငျ မူတညျ၍ တှကျခကျြရပါသညျ။မွနျမာနိုငျငံ ရနျကုနျမွို့၏ ဒတောမြားအရ R0 သညျ ၂.၁၂ ရှိနသေဖွငျ့ ပုံသနေညျးအရ တှကျခကျြကွညျ့လြှငျ herd immunity ရဖို့ ၅၅% အနညျး
ဆုံးကာကှယျဆေးထိုးပေးရနျ လိုအပျပါသညျ အဆိုပါအခကျြသညျ တှကျခကျြသညျ့ကိနျးဂဏနျးသာဖွဈ၍ အခွားသော အကွောငျးခွငျးရာမြားစှာကိုလညျး ထညျ့သှငျးစဉျးစားရမညျဖွဈပါသညျလကျရှိအခြိနျတှငျ အာဆီယံနိုငျငံ
မြားကို ကွညျ့မညျဆိုပါကလညျး စငျကာပူနိုငျငံတှငျ Pfizer vaccine ကို Jan ၈ ရကျနတှေ့ငျ အစောဆုံး ထိုးနှံနိုငျခဲ့သညျကိုတှရေ့မညျဖွဈပါသညျ။ထို့နောကျတှငျ အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံက China Sinovac ကာကှယျဆေးကို Jan
၁၃ ရကျနကေ့စတငျနိုငျခဲ့ပါသညျ မွနျမာနိုငျငံအနဖွေငျ့ Oxford ကာကှယျဆေးနှငျ့ အလားသဏ်ဍနျတူ အာနိသငျတူ India နိုငျငံထုတျ Covishield ကာကှယျဆေးကို Jan ၂၇ တှငျ ထိုးနှံနိုငျခှငျ့ရရှိသညျမှာ အထူးပငျ ဝမျး
မွေ ကျဖှယျရာဖွဈပါသညျကာကှယျဆေးနှငျ့ ပတျသကျ၍လညျး သိသငျ့သိထိုကျသညျမြားကို MoHS page တှငျဖျောပွထားသဖွငျ့ သခြောစှာဖတျရှုနိုငျပါသညျ ကာကှယျဆေးသညျ viral vector အမြိုးအစားဖွဈပွီးစိတျခရြသော
ဆေးလညျးဖွဈပါသညျ အာနိသငျထိရောကျမှုကို ပွောရလြှငျ ၆၂-၉၀% အထိရှိပွီး ပြှမျးမြှအားဖွငျ့ ၇၀% ရှိပါသညျ။အထူးသဖွငျ့ အသကျကွီးသောသူမြားတှငျပငျ ကာကှယျဆေး၏ ကိုယျခံအားတကျရှိမှု ကောငျးမှနျကွောငျး
ကာကှယျဆေးစမျးသပျသညျ့ clinical trial တှငျပါဝငျသောရလဒျမြားအရ သှေးထဲတှငျ Antibody level နှငျ့ active T cells တကျရှိမှုကိုကောငျးစှာပွသနိုငျကွောငျး ဆိုထားပါသညျ The Lancet journal Jan 8
ရကျနထေု့တျတှငျလညျး UK တှငျလကျရှိအသုံးပွုနသေော Oxford ကာကှယျဆေး၏ အစှမျးထကျမွကျမှုအပျေါ သုတသေနပွုမှုမြားဆကျလကျဆောငျရှကျနကွေောငျး ပွောထားပါသညျ။အခြုပျအားဖွငျ့ဆိုရလြှငျ ယခုမွနျမာနိုငျငံတှငျထိုး
နသေောကာကှယျဆေးသညျ UK နိုငျငံတှငျအသုံးပွုနသေောကာကှယျဆေးကို မူပိုငျခှငျ့ရပွီးထုတျလုပျသညျ့ ကုမ်ပဏီ ၃၀ ထဲမှ တဈခုဖွဈသညျ့ Serum institute of India မှ ထုတျလုပျသညျ့ အစှမျးထကျကာကှယျဆေးဖွဈ
သဖွငျ့ ကာကှယျဆေးထိုးနှံရနျ အကြုံးဝငျသူတိုငျး မပကျြမကှကျ ထိုးနှံမှု ခံယူနိုငျရနျ ရညျရှယျပါသညျ။ကာကှယျဆေး၏ အမြိုးအစားမြားနှငျ့ အကြိုးအာနိသငျ ၈ ခကျြကို ဒုတိယပိုငျးအဖွဈ ဆကျလကျရေးသားပါမညျ။မွနျမာပွညျ
သူမြားအားလုံး စညျးကမျးတှလေိုကျနာပွီး အမွနျဆုံး ကိုဗဈအန်တရာယျမှ ကငျးဝေးကွပါစေ။
အပိုင်း (၁) ၂၇/၁/၂၀၂၁ မှာကာကွယ်ဆေး စတင် ထိုးနှံပါပြီ တိုင်း/ပြည်နယ်အနှံ့ ကျန်းမာ ရေးဝန်ထမ်းလူဦးရေစုစုပေါင်း ၃ သောင်းကျော်ကို ထိုးနှံပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းလွန်းပါတယ် ဘယ်သူတွေရဲ့စွမ်း
ဆောင်မှုလဲဆိုတော့ အ စိုးရ ပြည်သူလူထုအားလုံးစည်းလုံညီညွတ် မှုရဲ့ပြယုဒ်ဖြစ်ပါတယ် နောက်နေ့တွေမှာ ကာကွယ်ဆေးကို တနိုင်ငံလုံးရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဆက်ထိုးသွားပါမယ်၂၉ နဲ့ ၃၀ မှာတော့ ပြည်ထောင် စု
လွှတ်တော် အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များကို ထိုးနှံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်နေ့ကစပြီး ပြည်သူတွေကို ထိုးနှံပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပြည်ထောင်စုအဆင့် တိုင်း/
ပြည်နယ်အဆင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ အတူထိုးနှံကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေထဲကဆို ဘယ်သူတွေကိုဦး စားပေးမလဲ ဒါကတော့ No doubt သံသယဖြစ်စရာမလိုတဲ့ အသက်ကြီးတဲ့ မိဘပြည်သူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာနိုင်ငံတိုင်းမှာ
ကျန်း မာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့နဲ့အတူတတန်းတစားထဲ ဦးစားပေးစာရင်းထဲ အမြဲပါသင့်တဲ့လူအုပ်စုဖြစ်ပါတယ် ဒီအုပ်စု သည် ရောဂါဖြစ်ပွားကူးစက်လွယ်ပြီး ဖြစ်ပွားလျှင်သေဆုံးမှု များပါတယ်။၇၅ နှစ်အထက်ဆို ၅ ယောက်ဖြစ်လျှင်
တစ်ယောက်သေဆုံးနိုင်ပါတယ် ၆၁-၇၅ အသက်အရွယ်ဖြစ်လျှင် ဆယ်ယောက်လျှင် တစ်ယောက်သေဆုံးနိုင်ပါတယ် ဒါဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာ အသက် ၆၅ နှစ်အထက် ဘယ်လောက်ရှိနေသလဲ လူဦးရေနဲ့သန်းခေါင်စာရင်းဌာနက
တာဝန်ရှိသူကို မေးမြန်းချက်အရ ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာလကုန်အထိအသက် ၆၅ နှစ်အထက်က ၃.၆ သန်းကျော်ရှိပါတယ် ဒါဆို ၆၀ အထက်ကရောဆိုတော့ ၅.၆၅ သန်းရှိပါတယ် ၁၈ နှစ်အောက်က ၁၇.၈၅ သန်းရှိပါတယ်။ဒါ
ဆိုကာကွယ်ဆေးရရှိနိုင်မှုအခြေအနေကရော …COVAX ကနေ လူဦးရေရဲ့ ၂၀% ကို ၂၀၂၁ အတွင်းရနိုင်ပါတယ် ဧပြီလ ၇ ရက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနေ့မတိုင်ခင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကို ပေးပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရက် ၁၀၀ စီမံချက်အရ ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ် ဒါဆို ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတာ ကတော့ ရှင်းမှာပါ မတ်လကုန် ဧပြီလဆန်းမှာရမယ် ဘယ်လောက်ရမလဲ ဆိုတာတော့ သေချာမသိသေးပေမဲ့ ကာကွယ်ဆေးရရှိမှုအပေါ်မူတည်
ပြီးအချိုးကျရမှာဖြစ်ပါတယ် ၂၀% ကိုတော့ တခါတည်းရမှာ မဟုတ်ပါဘူး အသုတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် လက်ရှိ COVAX က ကာကွယ်ဆေး သန်း ၃,၀၀၀ (၃ ဘီလီယံ) ကို ရရှိဖို့ရည်မှန်းထားတာမှာ သန်း ၂,၀၀၀ (၂ ဘီလီ
ယံ) ရရှိပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် အတော့်ကို အခြေအနေ ကောင်းနေပါပြီCOVAX မှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ၁၉၀ ရှိတဲ့အနက် မြန်မာနိုင်ငံက ဖွံ့ဖြိုးမှုအလယ်အလတ်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုလိုအပ်တဲ့တိုင်းပြည် ၉၂ နိုင်ငံထဲပါဝင်ပါတယ် လက်ရှိအနေနဲ့ COVAX က
တိုင်းပြည် ၄၆ နိုင်ငံကိုPfizer ကာကွယ်ဆေးတွေ ဖြန့်ဖြူးနေပါပြီ ဒီထဲမှာ ဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည် ၃၆ နဲ့ ဖွံဖြိုးမှု အလယ်အလတ်ရှိတဲ့တိုင်းပြည် ၆ နိုင်ငံပါဝင်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံကိုလည်း မတ်လအတွင်း ရောက်ဖို့ရှိပါတယ်။လက်ရှိ WHO
က အသိအမှတ်ပြု Pre qualified vaccine မရှိသေးပေမဲ့ ဒီလိုမျိုး နိုင်ငံအချင်းချင်း သယ်ယူ ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့ WHO အနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကို စစ်ဆေးပြီးနောက်အရေးပေါ်အသုံးပြုမယ့်ကာကွယ်ဆေး Emergency
Use List (EUL) ထဲမှာ ထည့်သွင်းပါတယ် လက်ရှိအချိန်အထိကတော့ Pfizer/BioNTech ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုသာ EUL ထဲမှာရောက်နေ ပေမယ့်နောက်ထပ် Moderna နဲ့ Oxford/AstraZeneca ကာကွယ်ဆေးကိုလည်း
EUL ထဲမှာထည့်သွင်းနိုင်ဖို့ အချက်အလက်များ တောင်းခံထားပါတယ် မကြာခင်ပါဝင်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါ တယ် ဒီလို EUL ထဲပါမှ COVAX က နိုင်ငံတွေကို ပေးပို့တဲ့စာရင်းထဲ ပါဝင်မှာပါပြီးတော့ အိန္ဒိယကနေ Covishield
ကာကွယ်ဆေး လူဦးရေ ၁၅ သန်းစာ (ကာကွယ်ဆေးအလုံး သန်း ၃၀) ဝယ်ယူထားဖို့ ကုန်အမှာစာကို Jan ၅ ရက်နေ့က ပေးပို့ ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် အမှာအတွက် ပေးရမယ့်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာရ၅ သန်းကို Jan 14 ရက်နေ့
နောက်ဆုံးထားပေးချေရမယ်ဆိုတော့ ခုလောက်ဆို ပေးချေပြီး ဖြစ်လောက်ပါပြီ ကျန်တဲ့တစ်ဝက် ဒေါ်လာ ၇၅ သန်းကို ကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ ၁၀ သန်းရောက်ပြီးတဲ့နောက် အနီးဆုံးဖွင့်ရက်မှာ ပေးချေရမယ်လို့သိရပါတယ် ရှေ့လ
ဖေဖော်ဝါရီ ပထမအပတ်မှာလဲ ဆေး ၂ သန်းထပ်မံရောက်ရှိပါအုံးမယ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ ၂၀၂၀ အရ စုစုပေါင်းလူဦးရေ ၅၄.၉ သန်းရှိပါတယ် ဒါဟာ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအပေါ် အခြေပြုပြီး projection အရ တွက်ချက်ထား
တာဖြစ်ပါတယ် ဒါဟာပြည်တွင်းမှာနေသူတွေသာပါဝင်ပြီး ပြည်ပရောက်နေသူ၎.၂၅ သန်း ရှိပါတယ် ဒီလူတွေထဲက ၇၀% သည်ထိုင်းနိုင်ငံရောက်နေပြီး ၁၅% သည် မလေးရှားနှင့် ကျန် ၁၅% သည် အခြားနိုင်ငံများတွင် ရောက်ရှိနေ
သော မြန်မာလူမျိုးများပါဝင်ပါသည် သို့ဖြစ်ပါ၍ ဝယ်ယူထားသော ၁၅ သန်းသည် လူဦးရေ၏ ၂၆% နီးပါးရှိပါသည်ထို့ပြင် အိန္ဒိယက အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချင်းချင်း ချစ်ကြည်မှု၏ ပြယုဒ်အဖြစ် ပေးအပ်ထားသော ကာကွယ်ဆေး ၁.၅
သန်း (လူဦးရေ ၇.၅ သိန်းစာ) Covishield ကာကွယ်ဆေးကလည်း ၂၂/၁/၂၀၂၁ နေ့တွင် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယနေ့တွင်ပင် စတင်ထိုးနှံနေပြီ ဖြစ်ပါသည် နောက်ထပ်လည်း လက်ဆောင်ဒုတိယအသုတ် ၁ သန်း လာဖွယ်ရှိ
ပါသည် တရုတ်နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr.ဝမ်ယိလာရောက်စဉ်ကလည်း ကာကွယ်ဆေးအလုံးရေ၃သိန်းလှူဒါန်းမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်ဒါဆိုရင်၂၀၂၁ အတွင်း ကာကွယ်ဆေးရရှိနိုင်မှုသည်
၄၆% အထက် ရရှိနိုင်ဖွယ်ရှိပြီး ယခုထက် ပိုမို၍လည်း ရရှိနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည် လက်ရှိတွင်လည်း ကာကွယ်ဆေးအတွက် အလှူငွေကောက်ခံ ရာတွင်လည်း နိုင်ငံတော်မှ မတည်ငွေ တစ်ဘီလီယံကျပ်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားများမှ ထည့်
ဝင်ငွေ ၁၉ ဘီလီယံနီးပါးဖြစ်သည့်အတွက် ဘီလီယံ ၂၀ နီးပါး ရှိနေပါပြီ အမေရိကန်ဒေါ်လာ မတည်ငွေ သန်း ၂၅၀ ထည့် ဝင်ငွေ ၃ သန်းနီးပါးဖြစ်သည့်အတွက် ၂၅၃ သန်း ဖြစ်သည်ကိုလည်း၂၁/၁/၂၀၂၁ နေ့ နိုင်ငံတော်
အတိုင်ပင်ခံမိန့်ခွန်းအရ ကြားသိရသည်မှာလည်း များစွာနှစ်ထောင်းအားရရှိလှပါသည် ပြည်သူတို့၏ သဒ္ဓါတရားထက် သန်မှုကလည်း တကယ့်ကို အံ့ချီးလောက်စရာဖြစ်ပါသည်။ဒါဆို ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန်
လူဦးရေဘယ်လောက်ထိ ကာကွယ်ဆေးထိုးရမလဲ? ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူဖို့ ထည့်ဝင်ဖို့လိုပါသေးသလား?ဒါနဲ့ပတ် သက်လို့ဖြေကြည့်ရမယ်ဆိုလျှင် များလေကောင်းလေပါပဲ ဘာလို့ဒီလိုပြောရလဲဆိုရင် ကာကွယ်ဆေးသည် ပိုက်ဆံရှိ
တိုင်းလည်း ဝယ်ဖို့မလွယ်ပါ ဝယ်လိုအားကများနေပြီး ရောင်းလိုအားကအကန့်အသတ်ရှိနေပါသည် နောက်ပြီး ကာကွယ်ဆေး အမျိုးအစားအလိုက် ဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုးရှိပါသည် ကာကွယ်ဆေးရရှိရုံနဲ့လည်း ထိုးနှံသည့်အဆင့်ရောက်ဖို့
operational cost များရှိပါသေးသည်။နောက်ပြီး လူအုပ်စုအားလုံးကိုကာကွယ်ဖို့ အစုလိုက်ကာကွယ်နိုင်မှု Herd immunity နှင့် ပတ်သက်၍ WHO science in5episode #1, 28th August တွင် ပြောပြချက်အရ နိုင်ငံ
လူဦးရေ၏၆၀-၇၀% ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန်လိုအပ်သည်ဟု WHO မှ Chief Scientist Dr. Soumya က ပြောကြားခဲ့ပါသည် သို့ရာတွင် အဆိုပါ အချက်သည် ခြုံငုံ၍ ပြောခြင်းဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်တခုချင်းစီ၏ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့်
Basic Reproduction Number R0 ပေါ်တွင် မူတည်၍ တွက်ချက်ရပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့၏ ဒေတာများအရ R0 သည် ၂.၁၂ ရှိနေသဖြင့် ပုံသေနည်းအရ တွက်ချက်ကြည့်လျှင် herd immunity ရဖို့ ၅၅% အနည်း
ဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရန် လိုအပ်ပါသည် အဆိုပါအချက်သည် တွက်ချက်သည့်ကိန်းဂဏန်းသာဖြစ်၍ အခြားသော အကြောင်းခြင်းရာများစွာကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ဖြစ်ပါသည်လက်ရှိအချိန်တွင် အာဆီယံနိုင်ငံ
များကို ကြည့်မည်ဆိုပါကလည်း စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် Pfizer vaccine ကို Jan ၈ ရက်နေ့တွင် အစောဆုံး ထိုးနှံနိုင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့နောက်တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက China Sinovac ကာကွယ်ဆေးကို Jan
၁၃ ရက်နေ့ကစတင်နိုင်ခဲ့ပါသည် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် Oxford ကာကွယ်ဆေးနှင့် အလားသဏ္ဍန်တူ အာနိသင်တူ India နိုင်ငံထုတ် Covishield ကာကွယ်ဆေးကို Jan ၂၇ တွင် ထိုးနှံနိုင်ခွင့်ရရှိသည်မှာ အထူးပင် ဝမ်း
မြေ က်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်ကာကွယ်ဆေးနှင့် ပတ်သက်၍လည်း သိသင့်သိထိုက်သည်များကို MoHS page တွင်ဖော်ပြထားသဖြင့် သေချာစွာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် ကာကွယ်ဆေးသည် viral vector အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးစိတ်ချရသော
ဆေးလည်းဖြစ်ပါသည် အာနိသင်ထိရောက်မှုကို ပြောရလျှင် ၆၂-၉၀% အထိရှိပြီး ပျှမ်းမျှအားဖြင့် ၇၀% ရှိပါသည်။အထူးသဖြင့် အသက်ကြီးသောသူများတွင်ပင် ကာကွယ်ဆေး၏ ကိုယ်ခံအားတက်ရှိမှု ကောင်းမွန်ကြောင်း
ကာကွယ်ဆေးစမ်းသပ်သည့် clinical trial တွင်ပါဝင်သောရလဒ်များအရ သွေးထဲတွင် Antibody level နှင့် active T cells တက်ရှိမှုကိုကောင်းစွာပြသနိုင်ကြောင်း ဆိုထားပါသည် The Lancet journal Jan 8
ရက်နေ့ထုတ်တွင်လည်း UK တွင်လက်ရှိအသုံးပြုနေသော Oxford ကာကွယ်ဆေး၏ အစွမ်းထက်မြက်မှုအပေါ် သုတေသနပြုမှုများဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ပြောထားပါသည်။အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင် ယခုမြန်မာနိုင်ငံတွင်ထိုး
နေသောကာကွယ်ဆေးသည် UK နိုင်ငံတွင်အသုံးပြုနေသောကာကွယ်ဆေးကို မူပိုင်ခွင့်ရပြီးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီ ၃၀ ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Serum institute of India မှ ထုတ်လုပ်သည့် အစွမ်းထက်ကာကွယ်ဆေးဖြစ်
သဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရန် အကျုံးဝင်သူတိုင်း မပျက်မကွက် ထိုးနှံမှု ခံယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ကာကွယ်ဆေး၏ အမျိုးအစားများနှင့် အကျိုးအာနိသင် ၈ ချက်ကို ဒုတိယပိုင်းအဖြစ် ဆက်လက်ရေးသားပါမည်။မြန်မာပြည်
သူများအားလုံး စည်းကမ်းတွေလိုက်နာပြီး အမြန်ဆုံး ကိုဗစ်အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးကြပါစေ။
ကြောငျးအပျလို့ ပိုကျဆံတောငျးရငျ တိုငျကွားနိုငျတဲ့ လိပျစာကို ပညာရေးဝနျကွီး ထုတျပွနျ